အမြင်၊ အမြင်နှင့်မျှဝေခြင်းမိုက်မဲခြင်း Martech Zone
ငါအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုဆင်းမောင်းလာတာနဲ့အမျှအဲဒါကိုကျွန်တော်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်အောင်နဲ့အချိန်မီ (လုနီးပါး) လုပ်နိုင်တဲ့အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုပဲလို့ထင်ပါတယ်။ ငါဟာသိပ်ကိုထူးခြားတဲ့အရာလို့ထင်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအရမ်းစမတ်ကျတဲ့လူတွေနဲ့မအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်၊ တွစ်တာနဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်တွေပေါ်မှာမိုက်မဲတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေအများကြီးကိုဖတ်နေတယ်။ ပြီးတော့ရုပ်မြင်သံကြားမှာကိန်းဂဏန်းတွေအများကြီးကြည့်နေတယ်။ အကယ်၍ လူများသည်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေသကဲ့သို့သူတို့၏ကားများကိုမောင်းနှင်ပါကပျမ်းမျှသက်တမ်းကား ၇၂ စက္ကန့်ခန့်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ငါပဲအခြားနေ့ကလုပ်ခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်၊ လေးစားတဲ့ဈေးရောင်းသူဆီအီးမေးလ်ပို့လိုက်တယ် Jascha Kaykas-Wolff at Mindjet ကြောင်းဆိုပါတယ်အသစ်သောဒေတာများကိုထောက်ပြ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုရေးစာဖတ်သူတွေကမီးလောင်နေတုန်းပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်, အနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းကြည့်စာဖတ်သူကျဆင်းစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတက်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကြည့်လျှင်ပြjustနာကသာမန်အားဖြင့်မကောင်းသောအကောင်အထည်ဖော်သည့်ဆိုရှယ်စာဖတ်သူများသည်သေလုနီးပါးဖြစ်နေနိုင်သည်ဟုထင်ရသည် အလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာကောင်းကောင်းလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Jascha ကထိုဆောင်းပါးကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ပြန်ပို့ခဲ့သည်။
သင်ကားတစ်စီးမောင်းနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့သွားနေသည့်နေရာကိုရောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သမျှသည်အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ရှေ့သို့ရွေ့လျားနေသောတိုးတက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပြီးနောက်ဘက်မှန်၌မှန်မှန်ကြည့်သည်၊ ဘေးဘက်မှန်များကိုစစ်ဆေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကန်းသောနေရာကိုခဏတစ်ဖြုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ငါတို့မှာစတီယာရင်ဘီးမှာလက်နှစ်ချောင်းရှိတယ်၊ ခြေဘ ၀ မှာဘရိတ်ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ငွေ့ကိုသုံးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ညံ့ဖျင်းသော၊ သတိကြီးစွာ ထား၍၊
Nope ။ ငါတို့မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကြည့်တယ် - မိုက်မဲတဲ့ - ဒါကိုငါတို့ကဖြတ်သန်းသွားတယ်။ Retweet ။ မျှဝေပါ။ ကြိုက်တယ် +1 ။ Woohoo!
တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်မနည်းသောအနေဖြင့် Snopes တွင်မှန်ကန်ရန်နှင့်သူဖြန့်ဝေသောသူ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သည်အနည်းဆုံးမဟုတ်ကြောင်း ပြန်၍ အီးမေးလ်ပို့ရန်အလွန်ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည် (ဖေဖေစိတ်မကောင်းပါ!) ။ လူတွေဟာစာသား၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုထဲမှာကလစ်တခုခုကိုယုံကြည်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှနည်းနည်းလေးပိုနက်ရှိုင်းစွာမတူးပါ။ တွစ်တာတင်ရုံတင်လိုက်ရင်၊ ဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းအားလုံးထံအီးမေးလ်ပို့လိုက်တာပါပဲ။ မိုက်မဲခြင်းသည်တန်ဖိုးရှိသည့်အရာထက်သတင်းအချက်အလက်စူပါလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ပိုမိုထိရောက်စွာဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားသည်ဤ၏ပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူးဆိုရင် ချာလီ Brooker အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှုမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြပါ၊
အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့အလုပ်မဖြစ်မျှဝေပုံနှင့်ဆင်တူသည်။ ကျနော်တို့ကလစ်, ကူးယူ paste နှင့်ထုတ်ဝေ။ မျှဝေရန်အလွန်လွယ်ကူသည်
အင်တာနက်ပေါ်မှာတောင်မှ၊ သင်ကအစစ်အမှန်ကမ္ဘာ၊ စာသား၊ အသံနဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေသုံးပြီးဖန်တီးထားတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်နေတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုရေးစာဖတ်သူများအားအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မူရင်းဆောင်းပါးသည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်လူတို့ကိုလှည့်ဖြားခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ သို့သော်သူတို့ကအချက်အလက်များ၏အစွမ်းထက်သောဖော်ပြချက်ဖြစ်သည့်အချက်အလက်နမူနာတစ်ခုတွင်တွေ့ရသည်။ ပုံပြင်ကိုဂရပ်ဖစ်တစ်ဝိုက်ရေးရန်တော်တော်လေးလွယ်ကူသည်။ ကျေးဇူးတင်စရာမှာအခြားသူများသည်အနည်းငယ်နက်ရှိုင်းစွာတူး။ မူလဇာတ်လမ်းအပြင်အခြားအရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကမကြာခဏအလုံအလောက်ဖြစ်ပျက်မထားဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောအမှားများကိုစျေးကွက်သမားများနှင့်နေ့စဉ်တွေ့မြင်ရသည် သူတို့ဘယ်ဘက်၊ ညာ၊ နောက်ကွယ်ကိုကြည့်ရန်လျစ်လျူရှုသည်။ သူတို့ဘယ်ရောက်နေမှန်းသူတို့မသိကြပါ၊ သူတို့ဘယ်သွားနေလဲကိုဂရုမစိုက်ကြပါ။ သင်ဘယ်နေရာမှာပဲအာရုံစိုက်နေမယ်ဆိုရင်ပတ်ပတ်လည်မှာလမ်းလျှောက်နေသောကြောင့်သင်ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးကိုတားဆီးနိူင်သည်။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောလမ်းကြောင်းဟုထင်ရသောအရာသည်သင်ဖြတ်ကျော်ရန်လိုသည့်အဖြေဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့နိုင်ငံရေးပင်ပိုဆိုးကြည့်ပါ။ နိုင်ငံရေးကြော်ငြာတိုင်းသည်အခြေအနေမှဖယ်ထုတ်ပြီးမထီမဲ့မြင်ပြုရန်လွယ်ကူသောအစွန်းရောက်အနေအထားသို့ရောက်ရှိသွားသည်။ နိုင်ငံရေးသမားများသည်ကြီးစွာသောတည်းဖြတ်ခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ ကံဆိုးပါတယ် သူတို့ရဲ့ပရိသတ်ကပိုပြီးထိုက်တန်ပါတယ်။
အတိတ်နိမိတ်များ၊ ဖန်သားပြင်များနှင့်အသံသွင်းစက်များရှိကမ္ဘာတွင် ... ဉာဏ်ရည်ထက်မိုက်မဲမှုကိုသွားရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာကြည့်ရှုရန်စာဖတ်သူ (ဤဘလော့ဂ်တွင်ပင်) သည်သင်၏အလုပ်ဖြစ်သည်။ မင်းငါ့ကိုဓာတ်ငွေ့၊ ဘရိတ်နဲ့လမ်းလွှဲဖို့မတိုက်တွန်းခင်လမ်းညွှန်အားလုံးကိုကြည့်ဖို့ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဟာကျွန်တော့်အလုပ်နဲ့တာဝန်ပဲ။ ဂျာနယ်လစ်များ၊ ဘလော့ဂါများ၊ မီဒီယာများနှင့်ထင်မြင်ယူဆချက်ရှိသည့်လေ့လာသုံးသပ်သူများပင်ပြည်သူလူထုအားအပြည့်အ ၀ အသိပေးရန်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်များအားလုံးကိုစတင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
ငါပတ်ပတ်လည်များလွန်းနိုင်ကြောင်းသို့မဟုတ်ကြောင်းပြီးမြောက်ရန်ဆန္ဒရှိများမှာသိပ်အကောင်းမြင်မဟုတ်ပါဘူး။ Stupid ကအများကြီးပိုလွယ်တယ်။ ငါ့ကိုမယုံဘူးလား ဂရုတစိုက်ရေးသားပြီးအသိဉာဏ်ရှိသောစာကိုဝေမျှပါ။ ထိုအခါရယ်စရာကြောင်ရုပ်ပုံတင်ပါ။ ဘယ်တစ်ခုကပိုကောင်းတာလဲ
Google Analytics စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခြေရာခံ Hootsuite ကိုထည့်နည်း
ဗီဒီယို - Pinterest အတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏လမ်းညွှန်
မေလ 24, 2012 မှာ 10: 19 AM
ဒေါက်ဂလပ်, ငါဒီ post ကိုကြိုက်တယ်။ တွစ်တာအကြောင်းကျွန်တော်အစောပိုင်းဖတ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုမှာမျက်မမြင်ပြန်ရေးခြင်းထက်စာရေးသားခြင်း၊ ရှေ့ဆက်ခြင်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်ဇာတ်ကောင်ပေါင်း ၁၄၀ မှာခေါင်းစဉ်တပ်စရာကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရလို့ပါ။ တစ်ခါတလေကျွန်ုပ်သည် tweets များကိုနှစ်ကြိမ်ဆင်ခြင်ပြီးဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်။ ၎င်းတို့သည်တစ်စုံတစ်ရာကိုမျှတသောဝေမျှမှုတစ်ခုမျှဝေမည်ဆိုပါကပို့စ်တင်ခြင်းမပြုတော့ပါ။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဘက်လိုက်မှုရှိတဲ့အီးမေးလ်များကိုပို့ခြင်း (သို့) ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့တင်ခြင်းအားဖြင့်လူတွေကသူတို့တန်ဖိုးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပုံကိုအံ့အားသင့်မိပါတယ်။ ငါ့မှာသူငယ်ချင်းဟောင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူကတကယ့်ဇီနိုအက်တ်ပဲ။ သူဘာကြောင့်သူ့အီးမေးလ်ကိုဘာကြောင့်မဖြေတာလဲလို့သူတွေးမိတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ သူရဲ့အီးမေးလ်တွေကကျွန်တော့် spam ဖိုင်တွဲကိုသွားပြီးသူ့ထံမှအီးမေးလ်များကိုလေးလတစ်ကြိမ်လောက်စစ်ဆေးသည်၊ သူ့မြေးသမီး၏စုံတွဲပြက်လုံးများ၊ ပုံများကို ... မသမာသောပစ္စည်းများကိုသာပြန်ဖြေသည်။ ငါစိတ်ရှုပ်နေသဖြင့်မင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးပေးပေးစေခြင်းကို (လူမျိုးဆက် ၁၀ ဆက်၏ကျိန်စာမှလွတ်မြောက်ရန်!) ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများ (သို့) နှစ် ဦး ထံမှအီးမေးလ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားဖူးနေသော်လည်း၊ ပစ္စည်းပစ္စယမျိုးများအတွက်အရမ်းအလုပ်များ။ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းသည့်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး ထံမှမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောအီးမေးလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရာ။ Fw - သိရန်အရေးကြီးသည်
မည်သည့်အခြေအနေများအားဖြင့်ဆိုပါကတစ်စုံတစ် ဦး ကခေါ်ဆိုသည်
မင်းမှာမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့မိသားစု ၀ င်တစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်
မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့သည့်နေရာ၏လိပ်စာ၊ နေရာ၊ DO
ကြည့်ရသည်မှာ [XYZ ကုမ္ပဏီ၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်] တွဲဖက်ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်
နှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များသည်ဤလိမ်လည်မှုအနုပညာရှင် / တစ် ဦး ချင်းစီမှဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်သည်။
[XYZ ကုမ္ပဏီ၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထည့်သွင်းမှု] အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး သည်ဝင်ငွေရနေပြီဖြစ်သည်
- အိုး။ ကောင်းပြီ။ ဒီလူဟာဒီအဖြစ်အပျက်အတော်များများကိုသိပြီးဖြစ်လို့သူတို့သူငယ်ချင်းတွေကောဖြစ်သွားပြီလား။ ငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဂရုစိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာငါတို့ဝမ်းမြောက်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။